Canvas: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း & Logo, Flyer, ပိုစတာထုတ်လုပ်သူ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Canvas: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း & Logo, Flyer, ပိုစတာထုတ်လုပ်တဲ့
Canvas: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း & Logo, Flyer, ပိုစတာထုတ်လုပ်သူ APK ကို
Canvas ဒီဇိုင်းကိုအံ့သြလောက်အောင်ရိုးရှင်း (နှင့်ပျော်စရာ) စေသည်! 🙌အလုပ်, အသက်အဘို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးလျက်, play-ပင်သင်ကဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါဘူးလျှင်!
တစ်ခုအံ့သြဖွယ် Instagram ကိုဇာတ်လမ်းလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထုံးစံ Instagram ကို layout ကိုဖန်တီးရန်ရှာဖွေနေပါသလား မွေးနေ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုအောင်ပင်စွယ်စုံဂရပ်ဖစ်တစ်လိုဂိုထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကိုဒီဇိုင်း app ကို, ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ, သင့်အကောင့်တစ်ခု Pinterest သို့မဟုတ်တွစ်တာနဖူးစည်းစာတမ်း, ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ပါသလား? Canvas ပေါ်မှာရှိသမျှသောဤဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများနှင့်ပိုပြီးဖန်တီးပါ။ သင်၏ဖုန်း & ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မရရှိနိုင်သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆို, သင့်ဒီဇိုင်းကိုအချိန်မရွေးသို့ပြန်ခုန်နိုင်အောင်။
1 ။ ခြစ်ရာဒါမှမဟုတ်အဆင်သင့်-to-အသုံးပြုမှုကိုဒီဇိုင်းအနေဖြင့် Start
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွတ်ပတ္တူနဲ့ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးပါ, သို့မဟုတ်သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ 60,000 အခမဲ့တင်းပလိတ်များမဆိုအသုံးပြုတဲ့အခါအချိန်ကုန်သက်သာ။ တစ်သင်ခန်းစာသို့မဟုတ်လက်မဲနှိုက်ဒီဇိုင်းများရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
2 ။ ဓါတ်ပုံကိုစာသားပြင်ရန် & add
အခမဲ့ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း, ဓါတ်ပုံများ, အပြည့်အဝအယ်ဒီတာ - အလွယ်တကူဓာတ်ပုံများမှကိုးကားသို့မဟုတ်မျိုးစုံစာသားကိုထည့်ပါ။ ယင်းဖောင့် (ကြှနျုပျတို့ 500 + options များရရှိပါသည်!), အရွယ်အစား, အရောင်, အကွာနှင့်အနေအထားပြောင်းပါ။
3 ။ စုံလင်သောပုံရိပ်ကိုသုံးပါ
သင့်ရဲ့ device ကိုပြခန်းကနေဓါတ်ပုံတွေကို Upload လုပ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်ပရီမီယံဓာတ်ပုံများ & သရုပ်ဖော်ပုံများကျွန်တော်တို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်ကနေကောက်။
4 ။ တစ်ဦးလိုလားသူများကဲ့သို့ Edit ကိုဓာတ်ပုံများကို
ဓာတ်ပုံ filter များလျှောက်ထားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာကိုသုံးပါအရောင်တက်ပြောင်းလဲ Vignette add နှင့်ပိုပြီး။
5 ။ ကမ္ဘာကြီးကိုကချွတ်ပြရန်
, Instagram ကို, WhatsApp ကိုတိုက်ရိုက်အီးမေးလ်ကို-သို့မဟုတ်သင့်ဒီဇိုင်းများ Share ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ device ကိုမှသိမ်းဆည်းပါ။
လူမှုမီဒီယာများအတွက် Canvas ကိုသုံးပါ
•တစ်ဦးဟာ Instagram ကိုပုံပြင်အယ်ဒီတာနှင့်အတူ instaquote နှင့်ပုံပြင်ပျေါလှငျထုတ်လုပ်သူ Create
• Facebook ကိုစာတိုက် & Facebook မှာအဖုံးကိုဖန်တီး
•ဒီဇိုင်း Pinterest & Twitter ကိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ & Youtube ကိုပုံငယ်များ
• Make ကတ်များ evites ဓာတ်ပုံ Collage နှင့်ပင်ပုံထုတ်လုပ်သူအဖြစ် Canvas ကိုသုံးပိုစတာဖန်တီးသူသို့မဟုတ်လိုဂိုဖန်တီးသူဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုအတွက်
အရာအားလုံးတို့အတွက် Canvas ကိုသုံးပါ
• Logo ဒီဇိုင်နာ, စာအုပ်အဖုံး, မည်သည့်စီမံကိန်းအတွက်ဘလော့ဂ်ဒီဇိုင်း
•မည်သည့်အဖြစ်အပျက်အဘို့အ Evites: မွေးနေ့ကဒ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ, မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ကြားချက်ကိုထုတ်လုပ်သူ evite ဖန်တီးသူ
•ရိုးရှင်းသောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ပုံရိပ်တည်းဖြတ်ခြင်း app ကို
•မည်သည့်အခါသမယများအတွက်ဓာတ်ပုံ collage ထုတ်လုပ်သူလက်ကမ်းကြော်ငြာထုတ်လုပ်သူအလံကိုထုတ်လုပ်တဲ့
•ပါတီဖိတ်ကြားချက်ကိုထုတ်လုပ်သူ, ကျောင်းပိုစတာထုတ်လုပ်သူ, ဗီဒီယိုအလံကိုထုတ်လုပ်တဲ့
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်•: လိုဂိုအယ်ဒီတာ, လက်ကမ်းစာစောင်, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, တင်ပြချက်, အထူးနှုန်းများပိုစတာထုတ်လုပ်တဲ့
ပြည်သူ့ Canvas အကြောင်းပြောပါအဘယျသို့
"ရုံငါ၏အစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုဂိုဒီဇိုင်းတစ်ခုစိတ်ကူးအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတကယ်ကိုလွယ်ကူပဲ! ဂရိတ်အလုပ်! "
"ဂရိတ် app ကို! ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအလုပ်တွေအများကြီးလိုအပ်နှင့်ဤအချိန် & ငွေအများကြီးကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ "
"ငါသည်ယခုအကြောင်းကို4နှစ်ပေါင်း Canvas သုံးပြီးခဲ့ကြရတယ်။ ငါကအရာအားလုံးကိုဒီဇိုင်း! ကြှနျတေျာ့ blog ကိုခေါင်းစဉ်, blog post: ဓာတ်ပုံများ, လူမှုမီဒီယာပုံများ, ငါ၏အကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်ထို့ထက် ပို. ။ သူကတောင်အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းများအတွက်အသုံးဝင်သော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသည်အမြင့်မားကအကြံပြု! "
လျင်မြန်စွာ Designs Create
ပိုမိုမြန်ဆန်တင်းပလိတ်များတွေ့ရှိရန်ရှာရန်သုံးပါ။ သင့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ထဲမှာအမျိုးအစား: "မွေးနေ့ကဒ်," "ကလေးဓာတ်ပုံကို collage" ရောင်းချလက်ကမ်းကြော်ငြာ, "" "ရက်စွဲကဒ်ကိုကယ်တင်" ဂီတပိုစတာထုတ်လုပ်သူ "," အလှလူမှုမီဒီယာပို့စ်, "ပို။
အလွယ်တကူသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဒီဇိုင်းများ share & တည်းဖြတ်ရန်အခမဲ့အသင်းကိုဖန်တီးပါ။ တင်ပြချက်များ, စီးပွားရေးကတ်များ, လက်ကမ်းစာစောင်နှင့်အခြားဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အပြီးသတ်ဖို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အရောင်တွေ set & အမှတ်တံဆိပ်ဖောင့် upload တင်မှလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် Canvas မှ Upgrade ။
တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုဖန်တီးသူ, ပိုစတာဖန်တီးသူ, လိုဂိုထုတ်လုပ်သူ, အွန်လိုင်းဖိတ်ကြားချက်ကိုထုတ်လုပ်သူ, စီးပွားရေးကဒ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ-အဘို့ကြီးသော-ရှာဖွေနေဒီဇိုင်းများလိုအပ်နေသည်ဟုဆိုခွအေနအေအဖြစ် Canvas အသုံးပြုခြင်း။
, သီးသန့်ဒီဇိုင်းအကြံပေးချက်များသည် Instagram ကို & Facebook ပေါ်မှာ @canva Follow features တွေအပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်လတ်ဆတ်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်မှာသတင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
READ_EXTERNAL_STORAGE: တစ် template ကိုသို့သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြခန်းကနေပုံတစ်ပုံကိုထည့်ပါ။
ကင်မရာ / WRITE_EXTERNAL_STORAGE: တစ်ဒီဇိုင်းအတွက်သုံးစွဲဖို့ app ကိုအတွင်းဓာတ်ပုံကိုယူနှင့်သင့်ပြခန်းထဲမှာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တောင်မှသင်အကြိုက်ဆုံးတီဗီစီးရီး Filler ဖြစ်စဉ်များရှိခဲ့ - အတူတူပင်တစ်ခါတစ်ရံ apps များအဘို့အသွား! အဘယ်အရာကိုမျှလည်းစိတ်-မှုတ်ဒီ update ကိုအတွက်, စာသားတည်းဖြတ်ရေးများအတွက်ရုံကောင်းသော ol '' ပြုပြင်မှုများ & တိုးတက်မှုများ။
အစစ်အမှန်မကြာမီလာမည်: ဗီဒီယိုများနှင့်အတူဒီဇိုင်းများဖန်တီး & ပို့ကုန်။ 🎥
https://canva.me/android မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မျှဝေပါ။ မင်္ဂလာဒီဇိုင်း!
Canvas: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း & Logo, Flyer, ပိုစတာထုတ်လုပ်တဲ့
19.96 ကို MB
Logo ပြုလုပ်သူ 2019 …
လိုဂိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား - အိုင်ကွန် ...
Logo Maker - အခမဲ့…